> Resource> iPad> iPad ndabere extractor: Olee otú Wepụ iPad ndabere
Ọ bụrụ na ị na-n'amaghị ama ehichapụ faịlụ gị iPad na chọrọ ịchọta ụzọ naghachi ha, ma ọ bụ nanị chọrọ iji nweta gị iPad ndabere faịlụ na kọmputa gị, ị na-nri ebe a. Isiokwu a gosiri gị otú wepụ faịlụ site na iPad ndabere, gụnyere photos, videos, kọntaktị, ozi, ndetu, na otú pụta. Na-agụ na maka nkọwa.
iPad ndabere extractor: Chọta gị niile gara aga data
iPad ọrụ ga-ama na ọ na iTunes site a ndabere faịlụ gị iPad mgbe ị mmekọrịta gị iPad na ya, mgbe nkwado ndabere na mpaghara bụ unreadable ọdụ data. Mkpa ka ị wepụ ya n'ihu agụ. Olee otú wepụ iPad ndabere? Ọ bụghị dị ka ihe siri ike ka ị na-eche. Na iPad ndabere extractor ngwá ọrụ, ị pụrụ ime ya enweghị ihe ọ bụla mgbalị. Ọ bụrụ na ị na-enweghị echiche banyere iPad ndabere extractor maka Windows ma ọ bụ Mac, i nwere ike m nkwanye ebe a: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac), ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows). Ma Mac na Windows nsụgharị nke software bụ nnọọ nchebe na pụrụ ịdabere na. Ị nwere ike iji ha ka ha wepụ gị iPad ndabere faịlụ na 2 nzọụkwụ, na i nwere ike ihuchalu niile data gị iPad ndabere tupu adịrị ya.
Download ikpe mbipute n'okpuru maka free inwe a-agbalị. Họrọ onye ziri ezi n'ihi na kọmputa gị usoro.
Rịba ama: Iji wepụ iPad ndabere, ị nwere ike ibudata ọ bụla version nke usoro ihe omume n'elu. Ha niile ekwe ka ị na-eme ya n'ụzọ zuru okè.
N'agbanyeghị na Mac version ma ọ bụ Windows version na ị na-n'ịkpa, ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru wepụ gị iPad ndabere. N'ebe a, anyị na-Windows version ihe atụ (Nzọụkwụ na Mac version ndị yiri).
Step1. Gbaa ndị iPad ndabere extractor na họrọ ndabere faịlụ
Gbaa ndị iPad ndabere extractor maka Windows na kọmputa gị mgbe wụnye ya. Isi window ga-apụta dị ka ndị na. Ebe a niile gị backups maka Apple ngwaọrụ e nyocharuworo si. Ị nwere ike họrọ otu maka gị iPad na pịa "Malite iṅomi" na-aga n'ihu.
Step2. Wepụ iPad ndabere faịlụ
Mgbe iṅomi, i nwere ike inwe otu akụkọ n'okpuru, ebe niile data na iPad ndabere na-egosipụta na edemede. Ịhụchalụ ha otu otu na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Atụmatụ: Iji zere data ọnwụ, ọ dị mkpa ka ndabere gị data mgbe nile, nke mere na ị ga-Echegbula onwe gị banyere ya mgbe ọdachi ọgụ gị.